I-Victoria House Resort kunye ne-Spa yase-Belize: i-Ultimate Thanksgiving Holiday Getaway
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » I-Victoria House Resort kunye ne-Spa yase-Belize: i-Ultimate Thanksgiving Holiday Getaway
Iindaba zaseBelize • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IVictoria House Resort & Spa, eBelize, indawo yokuchithela iholide ephumelele ibhaso ephambi kolwandle kweyona ndawo inkulu yeziqithi zaseBelizean ezikude nonxweme, iAmbergris Caye, inebhongo ngokunikezela ngezinto eziyimfuneko zohambo olugqibeleleyo loMbulelo luka-2021. Ukongeza kuluhlu lweendawo zokulala eziyilwe ngokucingisisiweyo, iVictoria House Resort & Spa ibonelela ngezinto ezininzi kunye nokuzonwabisa, unyango lokuphumla lwe-spa, kunye nombulelo ongalibalekiyo eparadesi, isidlo esimnandi sekhosi ezintathu.
Iindwendwe zinokonwabela isidlo soMbulelo esidalwe ngabapheki ngezona ncasa zimnandi zokuwa.
Abakhenkethi banokukhangela phambili ekujongeni izinto ezininzi ezenzeka kwesi siqithi kwimozulu yaseBelize ebukekayo kaNovemba.
Kwi-Ambergris Caye, iqondo lobushushu likwi-avareji ye-75°F, nto leyo eyenza indawo yokufikela yemozulu efudumeleyo ibe yeyona nto ikhethwayo ngabakhenkethi abathintela iiblues zasebusika.
“Indawo yethu yokuphumla elungele usapho lukhetho olukhulu kuye nabani na okhangela indawo yokubulela engenaxinzelelo kulo nyaka,” utshilo. Victoria House Resort & Spa UMphathi Jikelele, uJanet Woollam. “Ukongezelela ekonwabeni itheko lokubulela elenziwe ngabapheki bethu ngezona ncasa zimnandi zasekwindla, abakhenkethi banokujonga phambili ekujongeni izinto ezininzi zesiqithi kwimozulu yaseBelize ebukekayo kaNovemba.”
Amaqondo obushushu angoNovemba e-Ambergris Caye – esinye sezona ziqithi zintle eBelize, ezimayile nje ezingama-35 ukusuka elunxwemeni ukusuka eBelize City – akwi-avareji ye-75°F, nto leyo eyenza indawo yokufikela yemozulu eshushu ibe yeyona nto ikhethwayo ngabakhenkethi abathintela ubusika obuluhlaza.
“Emva kwexesha elide lokuhlala endaweni kunye nokusebenza ekhaya, iindwendwe ziya konwaba kukufumana le ndawo ingaqhelekanga, apho zinokukonwabela iintsuku ezinelanga kunye nesibhakabhaka esiluhlaza, kwaye ziphumle ecaleni kwechibi, i-snorkel, intlanzi, okanye i-scuba dive,” utshilo uWoollam. “IVictoria House Resort & Spa yindawo ekhethekileyo ukuthomalalisa umoya wexesha leeholide, kwaye sijonge phambili ekwamkeleni iindwendwe kwisiza sesiqithi.”
Ngamachibi angenasiphelo, ulwandle lwabucala, kunye nohambo olukwi-onsite kunye neFantasea Dive Shop eqinisekisiweyo ye-PADI, iVictoria House Resort kunye ne-Spa ibonelela ngolungelelwaniso olugqibeleleyo: indawo ezolileyo apho iindwendwe zinokonwabela ukuphumla okupheleleyo kunye nenkitha yezinto ezinomdla usapho lonke. Ukongeza kwimisebenzi efana nokukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukukhwela emanzini, kunye nokuloba, iindwendwe zinokujonga iitempile zamandulo zaseMayan ezikufutshane, zihambe zixhonywe phezu kweenkawu zehlathi ezinyakazela ziiNkawu eziMnyama eziMnyama, zijoyine uhambo lwehlathi elinemvula, okanye zityelele iLifa leMveli leHlabathi. i-coral reef yamava angaqhelekanga okuntywila.
Indawo yokuhlala ekumgangatho wehlabathi ibonelela ngemekobume egqibeleleyo yokuhlehla kwaye uphumle emva kosuku lokuphonononga, ukuba iindwendwe zikhetha iivillas ezizimeleyo ezinamachibi abucala enzelwe amaqela amancinci kunye neentsapho, iiCasitas ezitshisayo, iivillas zokujonga ulwandle, okanye amagumbi ahonjiswe ngokuhonjisiweyo. isakhiwo sobukoloniyali esinemigangatho emibini. IVictoria House Resort & Spa nayo inebhongo ngokubonisa a Inkonzo epheleleyo ye-spa kunye nokuqina komzimba kunye namaziko amathathu ahlukeneyo okupheka kuwo wonke umsitho.
Eyaziwayo ngokulungiselela ukutya kwaselwandle okutsha, okukumgangatho ophezulu kunye nezitya ezineenguqu zasekuhlaleni, iqela lezokutya laseVictoria House Resort lilungiselele imenyu ekhethekileyo yoMbulelo, ngokuqala ngeenketho ezimbini zekhosi yokuqala: a isaladi yepere kunye nefennel, i-walnuts, iirasintyisi, kunye netshizi eluhlaza, okanye ukuphakama isuphu yejinja yomnqatha nge crispy yehagu isisu, radish ebhakiweyo, kunye apile caramelized. Kwikhosi yesibini, iindwendwe ziya kuba nokukhetha indlu eyenziwe ipasta ifakwe i-ricotta-honey kunye ne-sage kwaye inikwe i-ragu yegusha enevumba elimnandi, i-fillet entsha ye-snapper ilungiswe ngeziqholo kunye ne-tangy cucumber yogurt sauce, okanye ibele ye-turkey eyosiweyo waphakwa nge casserole yembotyi eluhlaza kunye neetoti zebhatata ezimuncu kunye netshizi yebhokhwe. Ipudding yetofi encangathi esetyenziswa kunye ne-vanilla gelato kunye nesosi ye-bourbon caramel sosi iyakugqibezela isidlo seholide.
Ifikeleleka ngenqwelo moya yabahambi yemizuzu eli-15 ukusuka eBelize City, iVictoria House Resort yenza kube lula ukucwangcisa umbhiyozo wohlobo oluthile kwindawo engaqhelekanga kulo nyaka.
Ifumaneka eBelize eAmbergris Caye, eyona inkulu kwiZiqithi zaseBelizean ezikude nonxweme, iVictoria House ikwiikhilomitha nje ezimbini kumzantsi wedolophu entle yaseSan Pedro. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inika incasa yobuhle obungenazihlangu obugcina iindwendwe zibuya ngakumbi, zinamagumbi eendwendwe angama-42 ukusuka kwisitayile ukusuka kwicasita efulelwe ngengca ukuya kwiivillas eziphambi kolwandle ezinamachibi abucala, amagumbi ohlobo lwezityalo, kunye nezindlu zokujonga ulwandle. Indawo yokutyela yasePalmilla kunye neBar yeAdmiral Nelson zaziwa ngokutya okumnandi kunye nesiselo esinconywa yinkonzo engaqhelekanga, eyenzelwe umntu. Ukuqwalaselwa kwiinkcukacha ngabasebenzi kunye nabaphathi ngokufanayo kuye kwaphumelela ukuwongwa kumajelo eendaba ngamazwe kunye namabhaso avela kwimibutho ehloniphekileyo efana noConde Nast Traveler, uConde Nast Johansens. Ngolwazi oluthe vetshe, nceda undwendwele Victoria-house.com.